Wasaaradda warfaafinta oo tababar u furtay ku dhawaad 30 wariye | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Wasaaradda warfaafinta oo tababar u furtay ku dhawaad 30 wariye
Wasaaradda warfaafinta oo tababar u furtay ku dhawaad 30 wariye
Muqdisho (SNTV) Wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska ayaa maanta oo sabti ah u furtay 25 saxafi oo ka kala socda warbaahinta dawladda, dalwlada gobaleedyada iyo warbaahinta gaarka ah ee magaalada Muqdisho.
Agaasimaha Waxda Shaqalaha iyo tabarada ee wasaaradda, C/raxiin Ciise Caddow ayaa sheegay in tabarkan lagu baranayo tayeynta wax soo saarka raadiyaha iyo Tv-ga iyo siyaasada iyo tifaftirkooda, uuna socon doono muddo laba cisha ah.
Agaasimaha Maamulka Wasaaradda, Nasir Xuseen ayaa isna xusay in wasaarada ka go’an tahay in la laba laabo dadaalkeeda ku aadan tababarada aqoon kororsiga ah ee ay u qabaneyso wariyeyaasha.
“Waxa ay wasaaradda qabaneysaa sannadkan ilaa 6 tababar oo lagu hormarinayo mihnadooda shaqo, waxaan idin rajeynayaa in aad ka fa’ideysan doontaan khubarada tababarka bixineysa”, sidaas waxa yiri agaasimaha Wasaaradda warfaafinta, C/raxman Yusuf Sheekh oo tababrka u furey weriyeyaasha.
Waxa uu intaas ku daray in ay ka faa’ideystaan fursadan waxbarssho.
Previous articleMadaxweynaha JFS oo ka qayb-galaya xafladda caleemasaarka Madaxweynaha Puntland
Next articleWasaaradda Cadaaladda oo tababar u furtay Haween ka kala socday degmooyinka gobolka Banaadir